Ciidamada Dowladda oo Toogtey Haweeney iyo Nin Katirsanaa Kooxda Alshabaab – Radio Daljir
Seteembar 7, 2017 8:18 b 0
Wararka ka imaanaya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowlada shalay Duleedka magaalada Xudur ku dileen Haweeney iyo nin socoto ahaa ay ku eedeeyeen in Al Shabaab katirsanaayeen.
Ciidamada dowlada oo howlgal ka sameeyay duleedka magaalada Xudur ayaa toogtay haweeneydan lagu eedeeyay in ay katirsaneyd Al Shabaab, waxa ay sidoo kale ciidamada dileen nin kale oo safrayay isna ku eedeeyeen in uu xariir la lahaa Al Shabaab.
Taliyaha Saldhiga Degmada Xudur ee Gobolka Bakool Xuseen Maxamed ayaa Warbaahinta u sheegay in labada ruux ay dileen ciidanka dowlada ay xubbo ka ahaayeen dagaalyahanada Al Shabaab in mudo ahna ku daba jireen.
Waxa uu sheegay taliyaha in haweneyda lagu dilay duleedka magaalada Xudur marar badan laga shakiyay ayna imaan jirtay magaalada , waxa uuna tilmaamay in xogaha magaalada ay u gudbin jirtay kooxda Al Shabaab.
Ciidanka dowlada ayaa mararka qaarkood dila dad shacab ah ay ku eedeeyaan in ay taageersan yihiin Al Shabaab, waxaana gobolada qaar ciidanka ay dadka dilaan iyaga oon wax maxkamad ah saarin dambina aan lagu soo oogin dadka ay qabtaan.